ချစ်သူလို့ပြောနိုင်ပါသလား ~ စန္ဒကူး
ကျွန်မချစ်တဲ့မိသားစုလေးရှိတယ်။လေးစားမြတ်နိုးရတဲ့ချစ်သူတစ်ယောက်ရှိတယ်။ တစ်နေ့၊ကျွန်မမရှိတော့တဲ့တစ်နေ့၊ဒါမှမဟုတ်ပြန်ဆုံတဲ့တစ်နေ့မှာအမှတ်တရဖြစ်အောင်ရင်ထဲကစကားတွေ၊ခံစားချက်တွေ၊အတွေ့ကြုံတွေ၊ ချက်ဖြစ်တာလေးတွေနဲ့ဝေမျှခြင်တာလေးတွေ၊ကိုဒီထဲမှာသွန်ချထားတယ်။
ကျွန်မ ဘ၀ (170)
စားချင်စဖွယ် ပြင်ဆင်ကွယ် (235)
ရီမလား ပြုံးမလား (9)
အချစ် နှင့်ကျွန်မ (28)
စန္ဒကူး © 2010. Powered by Blogger.
အချိန်လေးရရင် vote ပေးသွားပါနော်။ခေါင်းထဲရောက်နေတာတော့ကြာပြီ။
ဆေးရုံတစ်ဝက်၊ အိမ်တစ်ဝက် လှည့်နေရတဲ့အချိန်မို့ အိမ်လုံးလုံးပြန်ရောက်မှ ပေါက်ကရ ထပ်ချက်ပါ အုံးမယ်။
Posted by စန္ဒကူး at 10:49 PM
Labels: အချစ် နှင့်ကျွန်မ
Myue Myue said...
ချစ်လို့ပေါ့.. သူတခုခုမှားယွင်းသွားမှာ စိုးရိမ်လို့ တဖြစ်တောက်တောက်ပြေနေရတာပေါ့.. :)
ကိုယ်ကရော အမှားတွေ မလုပ်သင့်တာတွေပဲလုပ်နေလို့ အော်ငေါက်တာရော ဖြစ်နိုင်ဘူးလား ဟဲဟဲ။
It is depend on your health too, when you are unwell you might shout & mightbangry him.
I just recovered from serious illness. I complained, shouted him even I got his care & kind help.
Take care Kuu
အင်း..အခုဟာက အပြစ်ဆိုတာပြောစရာရှိဘဲ စိတ်မရှည်နိုင်အော်ငေါက်နေတာကိုပြောတာပါ.. အမှားကြောင့်မဟုတ်ပါဘူး။
September 20, 2010 at 12:33 AM
ငေါက်တတ်တဲ့ လူမို့ နေမှာပါ မချစ်ဘူးတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလေ ၊ ကူးကငေါက်တာမကြိုက်ဘူးဆိုရင်သေချာမှာထားပေါ့ တဖြည်းဖြည်းတော့ အဆင်ပြောပါလိမ့်မယ်။
September 20, 2010 at 1:43 AM
ကူးကတော့ အော်ငေါက် ပြောတတ်တဲ့သူဆို အရမ်းမုန်းတယ်။ ငယ်ငယ်ကတည်းက မိဘမောင်နှမ တွေကအစအော်ဟစ်ပြောတာတွေမကြားဖူးဘူး..
ကိုယ်မကြိုက်ဘူးပြောထားရက်နဲ့ ခဏခဏ အော်ငေါက်တာတွေကြားရရင် တောတော့ကို စိတ်ပျက်တယ်..စိတ်လဲကုန်တယ်..
September 20, 2010 at 2:10 AM
Kuu Kuu, It depends on person n condition including age,health.........There's no fomular n fix answer.B cool n happy.
ှဗုတ်သွားတယ်နော်။ အော်ငေါက်ပြောတတ်တာ အကျင့်ပါတာ။ စိတ်မရှည်၊စိတ်တိုတတ်တဲ့ မျိုးရိုးဗီဇ ပါလာတာလည်းဖြစ်နိူင်ပါတယ်။ မကောင်းတာ သိပေမဲ့ တစ်ခါတစ်လေကျ ထိမ်းလို့မရဘူးလေ။ စိတ်မရှည်တာကို။ ချစ်တာ မချစ်တာနဲ့တော့သိပ်မဆိုင်ဘူးထင်တာပဲ။
ချစ်တာ၊မချစ်တာနဲ့ တော့မဆိုင်လောက်ပါဘူး။ ကြီးပြင်း လာတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်၊ အခြေအနေ တွေလည်းပါမှာပါ။ ကူးလေးကို မိသားစုကအမြဲလျှော့ပြောနေတော့ သူက ပုံမှန်ပြောတဲ့အခါ ကူးအနေနဲ့ အော်ငေါက်တယ် ထင်တာ လဲဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာပေါ့။ ချစ်သူက ကူးလေးကို အရမ်းချစ်မဲ့ပုံပါ။
လူရဲ့ စိတ်ဓာတ်အကျင့်နဲ့ဆိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ အစ်မနဲ့ တူတယ်၊ အော်ဟစ်တာ အစရှိတဲ့ ကြမ်းတမ်းမှုတွေကို မကြိုက်ဘူး။ ကျွန်တော်ချစ်တဲ့သူကို မပြောနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ၊ မသိတဲ့သူတွေကိုတောင် ကျွန်တော် မအော်မငေါက်ဘူး။ အဲဒီလို အပြစ်ပြော အော်ငေါက်နေတဲ့သူနဲ့ တွေ့ရင် အရမ်း စိတ်ညစ်တယ်။ နဂိုကစကားနည်းတဲ့သူ အဲဒီအချိန် စကားလုံးဝ မပြောတော့ဘူး။
ကျွန်တော်ကတော့ နံပါတ် (၅) ကိုရွေးခဲ့ပါတယ်။
September 22, 2010 at 8:52 PM
howdy I am Trying to find for people to join my Guild Caesary come check it out. and join my army please! hawks raiders at http://www.lekool.com . Been playing Caesary game for6weeks. Caesary has been the best browser game inalong time!
vote လိုက်ရပေမယ့် အကြောင်းအရာတွေကမတိုက်ဆိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ် အဲလိုပြောရလို့ဆောရီးပါနော် ဥဥ ပြောရမယ်ဆိုယင် ခုထိဘယ်တစ်ယောက်ကိုမှအော်ဟစ်ငေါက်ငမ်းမိခြင်းမရှိသေးဘူးခုတလောတော့ သမီးနဲ့ရန်ခဏခဏ ဖြစ်တတ်တဲ့သူ့မာမားကိုခဏခဏဆူမိနေတယ် သူကလည်းဘာမှတော့မပြောပါဘူးသမီးလေးကိုဥဥတအားချစ်တာသိနေတာကိုး အော်တာတော့မဟုတ်ဘူးဆူတာ မတူဘူးနော် ဥဥ ပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်က အော်စရာမလိုဘူးလို့
အရမ်းချစ်တဲ့သူဆို အော်ငေါက်ဖို့မပြောနဲ့ .. မျက်နှာညိုမှာတောင် မခံနိုင်ဖူးး(
သူ့ကို စိတ်ဆင်းရဲအောင် မလုပ်ပါဘူး စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာစွာဖြင့် အသံညှင်းညှင်းလေး ရယ်နေတာ သဘောကျတယ်။
The Mandalay Gazette | Organizing for Myanmar Burma | News Network
3AM in Orchard Road
Bliss of Us မြန်မာတို့ရဲ့ ဒုတိယအိမ်မှသည် SanoMaru Home စ နို မာ ရု အိမ်ကလေးဆီသို့ ~ ~ ~
Ezymyanmar.com - Knowledge Collections for Myanmar Society
Top ten snacks for your hair growth
Myanmar Tourist Info
Tu Tu Tha
သစ္စာစောင့်သိရမယ့် အချစ် ငါ့မှာရှိတယ်။
စန္ဒကူး © 2010 Design by New WP Themes | Bloggerized by Lasantha - Premiumbloggertemplates.com